၄၄လမ်းက တိုက် ပေါ် က ခုန် ချ သွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် နာရီ တိုင်း အံ ၅ ခါ ကြိတ်မယ်ဆိုတဲ့ မောင်မောင်အေး – Shwe Yoe
၄၄လမ်းက တိုက် ပေါ် က ခုန် ချ သွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် နာရီ တိုင်း အံ ၅ ခါ ကြိတ်မယ်ဆိုတဲ့ မောင်မောင်အေး
မောင်မောင်အေးလို့ ဆိုလိုက်ရင်တော့ ကတုံးနဲ့အသံပါဝါ အားကောင်းကောင်းနဲ့ လူတိုင်းကငေးနေ ရလောက်အောင် စကားပြောကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာ နာမည်ကြီးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အစီစဉ်တင်ဆက်သူ မောင်မောင်အေးကတော့ သရုပ်ဆောင်သိပ်မ လုပ်ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တိုင်းနဲ့မစိမ်းတဲ့ဆယ်လီ တစ်ယောက်ပါပဲ။ထို့အပြင် မောင်မောင်အေး ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်နေခဲ့သူပါ။
သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်သူနဲ့ အတူ လှူကြမယ်အစီအစဉ်၊ We Love Yangon အဖွဲ့ ၊Quarantine ဝင်နေတဲ့ လူနာတွေကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေရေးစတာတွေမှာ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ရှိသမျှအချိန်ပေးပြီး ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရပ်နောက်ပိုင်း မှာတော့ စကစဘက်ကအလိုရှိနေတဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ လူထဲမှာ မောင်မောင်အေးလဲ အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ် ထားမှူကြောင့် ပြည်ပသို့ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ မောင်မောင်အေးက ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ပေါ်ပင်စာလေးတွေကိုရေးသား တတ်သူဖြစ်တာကြောင့် အမြင်မတူသူတွေရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းကို ခံရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ လူငယ် ၅ ဦးတိုက်ပေါ်က ခုန်ချခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ ပက်သက်လို့ ခုလိုပဲရေးသား လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နှစ်နာရီမဆိုရဲ့ ၄၄ မိနစ် ရောက်ချိန်တိုင်းမှာ …အံ ၅ ခါ ကြိတ်မယ်…. တောက် ၅ ခါ ခေါက်မယ်….လက်သီးကျစ်ကျစ် တင်းတင်း ၅ ကြိမ် ဆုပ်မယ်….အသက်တောင်ပေးခဲ့ရဲတဲ့ ….ကြယ်တွေအတွက် ….ငါ ……ဒီလောက်တော့ လုပ်နေနိုင်ရမယ်….ငါ….ဒီထက်အများကြီး ပိုလုပ်နိုင်ပါစေသား… လို့ ရေးတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.သူရေးထားတဲ့ပို့စ်အောက်မှာတော့ အမြင်တူသူ မတူသူများနဲ့ စည်ကားလို့ နေပြန်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မောင်မောင်အေးရဲ့ နှိုးဆော်စာအတွက် ဘယ်လိုမြင် လဲဝေဖန်ပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်.
လုံးတင်းနေတဲ့ ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးကို ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် အဖြစ် ဘယ်သူယူမလည်း လို့ မေးလာတဲ့ သဇင်ဦး
ရိုးရိုးလေးနဲ့ အမြင်ဆန်းလောက်အောင် လှလွန်းနေတဲ့ ချောကလျာ
အိုနိုးနိုး!လန်းလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင် နဲ့ မြင် သူ တိုင်း ကြွေသွားစေမယ့် ဖူးပွင့်သခင်
အရမ်း ကိတ်ပြီး ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ မျက်ဝန်း ရဲ့အလန်းစား ပုံများ